Vafundisi (maPasita) havana kubvira vatungamirira kereke yekutanga
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Vafundisi (maPasita) havana kubvira vatungamirira kereke yekutanga
Vafundisi (maPasita) havana kubvira vatungamirira kereke yekutanga
I TIMOTIO 1:2 KunaTimotio, mwana wangu chaiye pakutenda:
Izvi hazviiti kuti Pauro ave baba vaTimotio pamweya. Izvi zvinongoreva kuti Pauro akazivisa Timotio Shoko raMwari uye Timotio aive achiri murume wechidiki.
Asi chinhu chinoti rasisei. Hatibvumirwi kudaidza chero munhu kuti baba vedu vemweya.
MATEO 23:9 Musaidza munhu uri panyika baba venyu, nokuti mumwe chete ndibaba venyu, ivo vari kudenga.
Muna baba vekubereka panyika, kwete baba vemweya.
Zvinoreva kuti hakuna munhu ari pamuso penyu pamweya.
Kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro peungano kana sangano ndicho chaive chivi chikuru chekereke yekutanga. Vakuru vemukereke vakasimudzirwa ava vanodaidzwa kuti vanikoraiti (nico zvinoreva kuti kupamba. Kupamba ungano)
Mukereke yekutanga vatungamiriri vakatanga kudzikisira vanhu mukereke. Vakuru vemakereke vaida kwazvo kuonekwa vakakosha.
ZVAKAZARURWA 2:15 Nokudaro unavamwe vo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti, chinhu chandinovenga.
Iyi yaive nguva yekereke yechitatu pakati pemakore 312 AD na 606 AD. Zviito zvaive zvakudzwa kuitwa dzidziso. Apa muprista akasimudzirwa kana mufundisi aive akutonga kereke zviri pamutemo wekereke. Bhishopu akabva asimudzirwa kuti ave pamusoro nekutungamiririra vaprista kana vafundisi vakati kuti.
Nenguva yekereke yechina kwaive kwaitwa makadhinari vaitungamirira mabhishopu nemaachibhishopu.
Asi Mwari anovenga hutungamiri hwevanhu vakasimudzirwa mukereke.
Hatifaniri zvachose kukanganwa chinhu chakakosha ichi.
ZVAKAZARURWA 5:10 Mukavaitira Mwari wedu, kuti vave madzimambo navaPirisita, vabate vushe panyika.
“Wedu” zvinoreva kuti “tese”. MuKristu wese ndimambo uye muprista. Muprista aimira pakati pemaJuda naMwari. MuKristu wese akaponeswa muprista kune vasati vaponeswa nekuti anokwanisa kuita kuti mutadzi auye kuna Kristu. Asi kana mutadzi iyeye agamuchira Kristu, anobva avawo muprista.
Munhu mumwe ari pamusoro pemuprista muPrista Mukuru. Ndiye Jesu.
MaKristu ese akaponeswa maprista hakuna vamwe vanhu vangava pamusoro pavo. Jesu ega ndiye ari pamusoro pemuprista. Maprista ese akaenzana. Maprista angori pamusoro pevatadzi muzvirevo zvehushe hwaMwari.
VAHEBERU 3:1 Naizvozvo, hama tsvene, vagoverani neni pakudanwa kunobva kudenga, fungai zvakanaka Muapostora noMuPirisita mukuru wokupupura kwedu, iye Jesu Kristu
Madzimambo ese akaenzana. Mumwechete ari pamusoro pamambo ndiMambo wemadzimambo, ndiye Jesu Kristu.
Saka hakuna muKristu ari pamusoro peumwe muKristu. Ndidzo tsika dzavanikoraiti.
Kuti uve muKristu unofanira kuponeswa. Vatendi vose vakaponeswa ihama mumaShe saka nekudaro vakaenzana.
Hakuna hama iri mumhuri iri pamusoro peimwe hama. Vose vakaenzana vakafanana.
VAEFESO 3:14 Nemhaka iyi ndinofugama namabvi angu kunaBaba, vaShe wedu Jesu Kristu
15 avo, rudzi rwose kudenga napanyika runotumidzwa nezita ravo,
Kereke yese imhuri hombe imwechete. Tese takaenzana sevanakomana vaMwari.
MATEO 12:48 Akapindura akati kuna iye wakamuvudza, mai vangu ndianiko navanunu’una vangu ndivananiko?
Hukama hunobva pachinhu chimwechete chete. Kuva nhengo yemhuri yaMwari nekunge muchiita kuda kwaMwari. Nzvimbo yako mumuviri waKristu inobva pakuti uri kuita kuda kwake here. Hakuna nhengo yemuviri iri nani kukunda imwe nhengo. Nzvimbo imwechete iri pamusoro pamuviri ndiwo musoro nekuti muviri unotongwa nemusoro.
Musoro wega ndiwo uripamusoro penhengo dzemuviri uye ndiwo unodzitonga mashandiro adzo. Chinzvimbo chemusoro chingori chaJesu ega.
VAEFESO 5: 23 .... saKristuvo musoro wekereke;
Hakuna Magwaro anotaura kuti mufundisi kana kuti pasita ndiye musoro wekereke.
Chero mufundisi, anozviti mutungamiri kana musoro wekereke, akazvipa nechisimba simba raasina kupihwa muMagwaro.
MATEO 23:8 Asi imi musaidzwa Rabi, nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe imi mose muri hama.
Rabi aive mutungamiri akaiswa nevanhu musinagoge. Jesu akati hatifaniri kutora chinzvimbo ichi.
Mumakereke mazhinji pasita ndiye ave musoro wekereke akaitwa nevanhu. Hatifaniri kubvira tatora chinzvimbo chakadaro.
Hakuna munhu (ndizvo zvinotaura Jakobo) akabvira adaidzwa kuti “mufundisi kana pasita Jakobo” muBhaibheri.
Basa rapasita kana kuti mufundisi raive risina kana kukosha muBhaibheri zvekuti shoko rekuti “mufudzi” anozviti mufundisi kana kuti pasita nhasi rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva. Kune nzvimbo inosanganisira basa rehufudzi. Rekubatsira kuva gota kuvanhu mumatambudziko avo uye muhukama hwavo. Kuvaka kutenda kwevatendi vachangotanga nekuvadzidzisa zvakakosha zveBhaibheri uye kuvakurudzira kuvimba neBhaibheri.
Asi vafudzi vanozviti vafundisi kana mapasita havana kubvira vanzi ndivo vatungamiri kana misoro yemakereke. Havana kubvira vaisirwa kubvisa vanhu paMagwaro nekuda kwerudo rwavo rwekuturikira zvakataurwa nevamwe vanhu.
Saka mapasita kana kuti vafundisi, hushumiri hwaizova mukereke, vakanga vagara vamhurwa kanokwana katanhatu nemuprofita Jeremia muTestamente Yekare nekuda kwezvinhu zvese zvakaipa zvavaizoita kukereke.
JEREMIA 2:8 vafudzi vaindidarikira;
Vafudzi mapasita nhasi uno havagoni kugara vachitevera Magwaro nemazvo.
JEREMIA 10:21 Nokuti vafudzi vava vasina njere, havana kubvunza Jehovha; naizvozvo havana kuzofara,
Vane chinzvimbo chavasingapihwi neMagwaro chekuva vakuru vekereke, saka havabvunzi Mwari naizvozvo. Muipi wekutanga yaive mhuka yakashandurwa kuitwa nyoka yakabvisa Eva pautevera Shoko raMwari, Magwaro.
JEREMIA 12:10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemazambiringa, vakatsika mugove wangu namakumbo avo, vakaita mugove wangu unodikanwa rive renje risina chinhu
Zaruriro yezvakavanzika zveMagwaro kupfurikidza kuyananisa mavhesi emuBhaibheri ndiwo munda waMwari unomufadza. Kumhanyisana nekutevera zvakabatwa paitaura vamwe vaparidzi vachizvitaura nekuzvinatsa vachizvibatanidza pamwechete nenzira yefungidziro inorwisa zvakanyorwa muBhaibheri chaizvo kuita kwekunyangadza kunoparadza. Jesu akatiyambira pamusoro penyangadzi inoparadza. Iyi inzvimbo yakaipa kwazvo.
Mhepo inomiririra hondo nematambudziko. Mufundisi ega ega anoshingaira kwazvo kuparidza kuturikira kwake kwaanoona kunge kwakanaka achirwisa wese anopikisana naye.
JEREMIA 23:1 Vane nhamo vafudzi vanoparadza nokuparadzira makwai amafuro angu! Ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Kunatsa nekubatanidza mashoko akabatwa paitaura vanhu nekumaparidza kwabereka ndudzi zhinji dzedzidziso zvekuti vanhu vagere mumakereke havachagoni kutsigira kutenda kwavo nezvinobva muBhaibheri uye vaya vanopikisa vafundisi vanodzingirwa kunze. Kusaziva chaizvo zvinotaurwa neBhaibheri rakanyorwa kwaparadza vatendi vemharidzo.
Message believers once criticized the denominations for knowing so little about the Bible. Now they are in the same boat. Vanotenda kumharidzo vakambozvidza vemasangano kuti vanoziva zvishoma kwazvo pamusoro peBhaibheri. Izvozvi vave muchikepe chimwechete.
JEREMIA 23:2 Naizvozvo zvanzi naJEHOVA, Mwari waIsiraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu, "Makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, mukasaatarira; tarirai, ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvamabasa enyu ndizvo zvinotaura Jehovha.
Vafundisi kana kuti mapasita ndivo vanodzidzisa zvese. Havagoni kutsigira kutenda kwavo nekubatanidza mavhesi akati kuti eBhaibheri pamwechete. Saka vakukoshesa kubatanidza zvavakabata paitaura vatauri vane mbiri vozvisarudza, vachisiya zvinorwisa zvavanoda kutaura nezvazvo. Nekukanganisika kupfurikidza kuwanda kwemifungo yakasiyana iyi, vanhu vakamira kuzvifungira saka vanongoteedzera zvakataurwa izvozvo kunge shiri yeparoti vasina pavanotsigira zvavanotaura neBhaibheri. Vaya vanopikisa vanodzingirwa kure voitwa kuti vanzwe vasingatambirwi pakati pevamwe.
Kutukwa kunotyisa kwakaitwa vafudzi vanozviti vafundisi kana kuti mapasita uku kunoreva kuti maKristu haachatevera Magwaro kana kuti haasisina kuchenjera pakusimudzira mufundisi kana pasita semunhu anonzi musoro wekereke nekumupa simba risina anokwikwidza rekuvaudza kuti voitei kana kuti votenda mune zvipi.
Asi iyi itsika kana chinyakare chemasangano chakatorwa kubva kukereke yeRoman Catholic.
We prefer the denominational traditions of men to Scripture. Tinosarudza tsika dzevanhu dzemasangano pachinzvimbo cheMagwaro.
MARKO 7:6 Akati kwavari: Isaya wakaporofita kwazvo pamusoro penyu, imi vanyengeri, sezvakanyorwa, zvichinzi: Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, Asi moyo yavo iri kure neni.
7 Asi vanondinamata pasina, Vachidzidzisa dzidziso, iri mirairo yavanhu.
9 Akati kwavari: Zvirokwazvo, munoramba murairo waMwari, kuti muchengete tsika dzenyu;
Jesu haana kuda mudzidzi mumwe kukunda mumwe. Kuva hama munaShe kwakava kiyi yavo yekubudirira. Kwete kuita kwevakasimudzirwa.
Hapana chiprista chitsvene pakati pemaKristu naMwari. Chiprista chaAroni chakagumiswa pakabvarurwa chidzitiro cheTembere naMwari pakafa Jesu. Kuenzana kwemunhu wese munaShe ndiyo kiyi yeEvangeri, kwete kusimudzirwa nehutungamiri hwevanhu.
Vanhu vane zvipo zvakasiyana uye simba rakasiyana asi vakangoenzana.
Musabatanidze zita rechinzvimbo rakaita sekuti Rabbi kana kuti Pasita pazita remunhu kana muchitaura naye. Hazvina kubvira zvaitwa muBhaibheri.
MATEO 25:39 Takakuvonai rinhiko muchirwara kana mutorongo, tikavuya kwamuri?
40 Ishe uchapindura achiti kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pamakazviitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makazviitireni,
MuKristu muduku anodaidzwa kuti hama naJesu. Hama dzese kana vanhu vemhuri vose vakaenzana kuna Jesu.
The prophets who wrote the Old Testament had a special position as they were writing Scripture. Maprofita akanyora Testamente yekare vane nzvimbo yakakosha nekuti vakanyora Magwaro.
Hakuna akabvira ataura naDanieri akamudaidza kuti muprofita “Danieri”. Asi mumwe munhu paanotaura pamusoro paDanieri kune mumwe wake zvaive zvakafanira kumudaidza kuti muprofita Danieri.
Pauro haana kuzvitaura achizviti “mupostora Pauro” asi achiti “Pauro mupostora”.
Pauro haana kubvira aita rudo rwekuisa zita rechinzvimbo pazita rake.
II VAKORINTE 1:1 Pauro, muapostora
Hakuna aimudaidza kuti “Mupostora Pauro”. Asi aidaidzwa achinzi “Hama Pauro”.
Zita rechinzvimbo raungabatanidza nezita remunhu nderekuti “hama”.
MABASA 22:13 Akavuya kwandiri akamira, akati kwandiri: Sauro, hama, chivona! Nenguva iyo ndikamuvona.
Kuremekedza mufundisi kana kuti pasita semunhu akakosha kukunda vamwe vanhu zvakaipa zvakadaro.
JAKOBO 2:1 Hama dzangu, kutenda kwenyu kunaShe wedu Jesu Kristu, iye wokubwinya, ngakurege kuva nokutenda zvinovonekwa zvomunhu.
Kuremekedza munhu kwakaipa kana muchiyera munhu muchimuisa pamusoro peumwe. MaKristu ihama munaShe, kwete mutsetse wevanhu vakakosha vachitariswa nezvigaro zvavo. Musaise mazita ezvigaro pamazita avo kana muchitaura navo sezvo izvi zvinoita kuti vazvitutumadze.
Vapostora vakanyora Testamente Itsva vane nzvimbo yakakosha sezvo vakanyora Magwaro kuti kereke yekutanga itange. Vanhu ava vaive vakakosha. Vashanu vavo vakasarudzwa kunyora Testamente Itsva.
Asi vamwe vavo vese vaive vakuru kana kuti hama munaShe.
Vakuru vaive hama munashe vaive vakura muchitendero saka vaive nenheyo dzakasimba mukutenda. Hama imwe neimwe yaizova mutariri wekereke kana akura muruzivo rweMagwaro.
MABASA 15:23 Vakanyora mwadhi, vakaituma navo, yaiti: Vaapostora navakuru kuhama, dzokuvahedheni paAntiokia, napaSiria, napaKirikia; Mufaro!
Vapostora vekutanga vaive vafa vese negore 100 AD.
Kwaingova negumi nevaviri vavo. Vaitenderera vachitanga makereke. Kwaive nenzvimbo huru kwazvo dzekuenda zvekuti vaisagona kuramba vari panzvimbo imwechete nguva refu. Saka vaisiya vatariri vepanzvimbo kuti vatarire kereke yepavari.
MABASA 20:31 Naizvozvo rindai, murangarire kuti makore matatu handina kurega vusiku namasikati kuraira mumwe nomumwe nemisodzi.
Pauro akaita makore matatu ari paEfeso. Iyi ndiyo yakaita nguva refu zvakanyanya ari panzvimbo imwechete.
Pakutanga, Jerusarema raive nevanhu vakasimudzirwa pakati pemakereke.
Zvirevo zvakatemwa zvaingova zvina. Ibvai pakunamata zvifananidzo, zvibairo zvechipegani (ropa nezvinhu zvinouraiwa) nekurarama kusina hunhu.
MABASA 15:28 Nokuti Mweya Mutsvene nesu takati zvakanaka, kuti tirege kukutakudzai mutoro mukuru kunezvinhu izvi zvakafanira,
29 zvinoti: Regai zvakabayirwa zvifananidzo, neropa, nezvakadzipwa, novupombwe; kana mukazvidzora pazviri, muchaita zvakanaka. Sarai zvakanaka
Jerusarema, amai vemakereke vekutanga kubva pazuva rePentecositi, rakaita mitemo mishoma kwazvo.
Jerusarema rakabva raparadzwa muna 70 AD zvakare muna 135 AD nemaRoma. Saka kwaive kusisina kereke yaikwanisa kutora simba iri pamusoro pemamwe makereke.
Mwari haadi vanhu munzvimbo imwe vanotonga vanhu mune imwe nzvimbo.
Vakuru vepanzvimbo ndivo vanhu vanofambisa zvinhu mukereke. Hakuna munhu aiuya kubva kunze aive nechekutaura pamusoro pavo.
Muzvikamu zvekusimbisa Pauro akataura hushumiri hutatu chete mukereke.
Mapostora akataurwa pekutanga nekuti vakanyora Testamente Itsva inova chokwadi chikuru. Kuti isimbe kereke inofanira kutenda kuTestamente Itsva. Shoko rakanyorwa ndiMwari achitaura kwatiri kupfurikidza mupostora.
Kunobva kwauya maprofita anogona kufanotaura zvinhu zvichauya zvinotungamirira kereke musarudzo dzayo. Chiprofita chepanzvimbo ndiMwari anotaura kwatiri kupfurikidza muprofita. Munhu anozviti muprofita asi asina chinhu chiri munezvichauya chaanofanotaura haasi muprofita akasimba kana akakosha.
Asi kana tichiwedzera, kune hushumiri hwechiprofita humwechete hwakakosha huchazivisa zvakavanzika zveBhaibheri zvakarasika muNguva yeRima, zvotidzosera kudzidziso dzekutanga dzevaprofita muTestamente Itsva.
Hushumiri uhu hunouya pechipiri sezvo huchibva pane zvakanyorwa nevapostora. Eria uyu ega ndiye achagamuchira zaruriro yechokwadi chakarasika muNguva yeRima. Anenge asina dzidziso itsva dzekuwedzera kune zvakanyorwa muBhaibheri. Anongotidzosera kune zvaive nekereke yekutanga.
Asi Eria wenguva yekupedzisira anofanira kuzviwisira kune zvakanyorwa muTestamente Itsva nevapostora, nekuti vapostora ndivo vakatanga. Eria anokwanisa kutiudza zvakaparidzwa naPauro. Kuvandudza zvinoreva kuti kudzoserwa pane zvazvaive pakutanga.
MATEO 17:11 Akapindura, (Jesu) akati: Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Hushumiri hwechitatu kudzidzisa.
Mudzidzisi anotora zaruriro sezvakaziviswa nemuprofita wenguva yekupedzisira odzidzisa zaruriro idzodzo zvekuti dzinenge dzichigona kutsigirwa neMagwaro. Nekutora zvakataurwa nemuprofita muchizvidzosera kuMagwaro nekutsigira zvakadzidziswa nehama Branham neMagwaro, mudzidzisi anenge agadzira nheyo kuvavhangeri nevafundisi (vese vaive vasina kukodzera kutaurwa pakaziviswa gwara rehushumiri naPauro).
Vavhangeri nemapasita vanofanira kudzidza dzidziso yeBhaibheri kubva kuvadzidzisi. Kana vakasateerera vadzidzisi veBhaibheri vanogara neMagwaro vanozokoshesa zvakataurwa nevanhu vozvigadzirisa nekuzviturikira kuzviita zvinhu zvinoyevedza zvisimo muMagwaro. Izvi ndizvo zvinoitwa nemasangano mazhinji.
Vafundisi mumakereke eMharidzo vanoturikira zvakataurwa kuti vagotaura kuti Hillary aizokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika weAmerica muna 2016 ndivo mienzaniso yakanaka yekusaziva kureva kweBhaibheri kwakura mazuva ano. Vari kutonga! Zvinotyisa kwazvo kana tikada kufunga kuti zvinhu zvaipa zvakadii. Chavakagona kupa vateveri vavo inhau dzenhema. Kutaura pamusoro pekuuya kwenguva yeKutambudzika kukuru.
II VAKORINTE 11:5 Nokuti ndinoti handizi muduku napaduku-duku kuvaapostora vanopfuvura vamwe vose.
Kunyange Petro, Jakobo, naJohane vakaonekwa nevanhu sevapostora vakuru vane nhorondo yakanaka, havana kugona kudarika Pauro pakubata kwake akazouya kwatova kumberi ari nenhorondo yakaipa kwazvo yekuva mutambudzi wekereke.
Petro, Jakobo, naJohane vaive vapostora vakuru pane imwe nguva. Vakadzidziswa naJesu. Pauro akazouya achibva kunze uye haana kudzidziswa nevapostora. Asi akazovadzikatira kuti vaite sevaive vasisaonekwe. Jakobo akauraiwa naHerode. Petro haana kuzotaurwa mumashure meChitsauko 12 cheBhuku raMabasa avapostora. Pauro akazouya mumashure akazogadzirisa Petro, mupostora mukuru paZuva rePentecositi, Petro paaive paAntiokia.
Kefasi ndiro rimwe zita raPetro.
VAGARATIA 2:2 Ndakakwira nokuda kwokuratidzwa; ndikarondedzera pamberi pavo Evhangeri yandinoparidza pakati pavahedheni, asi kunavakanga vachikudzwa vari voga, kuti zvimwe ndirege kumhanyira pasina, kana kuti zvimwe ndatomhanyira pasina.
VAGARATIA 2:9 Vakati vavona nyasha dzandakanga ndapiwa, Jakobho, naKefasi, naJohane avo vainzi mbiru vakatibata isu tose naBharnabhasi namavoko orudyi okuyanana, kuti isu tiende kuvahedheni, ivo kuna vakadzingiswa;
VAGARATIA 2:11 Zvino Kefasi wakati asvika Antiokia ndakamudzivisa pachena, nokuti wakanga anemhosva.
Pauro paakatanga, Petro aive nekukudzwa uye aive mbiru mukereke. Asi, nekuda kwekuti aive munhu, aive achiri kudawo kugadziriswa nekutsiurwa.
Johane, semupostora, aive akabatikana zvakanyanya nekunyora mabhuku mashanu uye akazoita makore ari muchitsuwa chetorongo kuPatimosi achigamuchira Bhuku rake guru raZvakazarurwa.
Pauro akauraiwa naNero iye Nero asati afa mugore 68 AD.
Nenguva iyi mapostora aive atanga makereke mazhinji aizofambisa zvinhu pachawo nekuparidza Evangeri.
MuBhuku raMabasa hamuna kubvira mataurwa pamusoro pemufudzi anozvidaidza nhasi uno kuti mufundisi kana kuti pasita.
Zvinhu mukereke zvaitauriranwa nevakuru vaiwana mazano kubva kuvapostora.
Nhasi, kana vakuru vepanzvimbo vakakurukura pamusoro peTestamente Itsva vanenge vachitsvaga ruzivo kubva kuvapostora, sezvakaitwa nekereke yekutanga.
MABASA 15:7 Zvino, nharo huru dzakati dzavapo. Petro akasimuka akati kwavari: Varume, hama, munoziva kuti kubva pamazuva akare Mwari wakandisanangura pakati penyu, kuti vahedheni vanzwe shoko reEvhangeri nomuromo wangu, vatende.
MABASA 15:12 Ipapo vanhu vazhinji vose vakaramba vanyerere, vakaterera vana Bharnabhasi naPauro vachirondedzera zviratidzo nezvishamiso, zvakaitwa naMwari navo pakati pavahedheni.
13 Zvino vakati vanyarara, Jakobho akapindura, akati: Varume, hama, nditererei.
Mupostora Jakobo akabva apa pfupiso yezvaive zvaranganwa. VaHedeni vanofanira kutambira kure nekunamata zvifananidzo uye kurarama kusina hunhu.
MABASA 15:19 Naizvozvi ini ndinoti, ngatirege kugumbusa avo pakati pavahedheni vakatendevukira kunaMwari;
20 asi tivanyorere kuti varege zvakashatiswa nezvifananidzo, novupombwe, nezvakadzipwa, neropa.
MABASA 15:22 Ipapo vaapostora, navakuru, nekereke yose, vakati zvakanaka kuti vasanangure varume pakati pavo, vavatumire Antiokia pamwe chete naPauro naBharnabhasi, naSirasi, vakuru pakati pehama.
Vamwe vanhu vakaonekwa nekuti vaive neruzivo uye zvipo. Asi vakaramba vari vanhu nekuti vaive pakati pehama. Havana kubvira vazvitorera mazita ezvinzvimbo akasarudzika.
23Vakanyora mwadhi, vakaituma navo, yaiti: Vaapostora navakuru kuhama, dzokuvahedheni paAntiokia, napaSiria, napaKirikia; Mufaro!
Kereke yekutanga yaive panheyo dzedzidziso dzevapostora, sezvazvakanyorwa muTestamente Itsva. Zvino kereke imwe neimwe panzvimbo yaifambiswa nevakuru nehama munaShe.
MABASA 15:32 Judhasi naSirasi, vaiva vaporofita vamene, vakavaraidza hama namashoko mazhinji, nokuvasimbisa.
Muprofita aikwanisa kutaura zvinhu zvichaitika. Uhu hushumiri hwakakosha kana chipo chakadaro chikawanikwa. Asi hakuna akabvira azvidaidza kuti “muprofita Judasi” kana “muprofita Sirasi” pavaitaura navo. Vanhu vakakosha vaive vapostora gumi nevaviri. Vaive chikwata chakasarudzika. Vaive vakakosha nekuti vaizonyora Magwaro. Pavakafa, basa ravo raive razadziswa.
Humwe hushumiri hwaive hwakakosha hwaive hwehama Branham vaizozivisa zvakavanzika zveMagwaro zvaive zvarasika muNguva yeRima. Aisakwanisa kugadzira dzidziso itsva. Aingokwanisa kutidzosera kune zvakatendwa nekereke yekutanga chete. Kereke yekutanga yeTestamente Itsva ndiyo yaive kereke yechokwadi. Tinofanira kuvatevera nepatinogona napo kuita zvavakaita.
Vapostora vekutanga chete ndivo vaive nezvinzvimbo zvakasarudzika nekuti vakanyora Magwaro.
Hama Branham vakauya kuzozivisa zvavakanyora. Havaikwanisa kuwedzera kune zvakanyorwa muBhaibheri kana kubvisa chero chinhu kune zvavakanyora.
Vamwe tese takaenzana mukusakosha kwedu.
Tine chatinoreva nekuti Kristu akaripira muripo nekuda kwedu. Asi hatina kukosha sezvo zvatinofunga zvisina zvazvinoreva uye zvinofa nesu.
Ndapota tarisai kuti Bhaibheri rinomhura zvakadii nguva yekereke yedu yekupedzisira yeRaodikia. Mutumwa kana nhume yakatiudza kuti tiri marutsi mapofu uye hatipisi kana kutonhora. Hapana vakasiirirwa kana kusarudzwa pakutaura uku. Saka munofunga kuti mapasita kana vafundisi vakakosha here?
Hushumiri hwechokwadi chete ndehwekutsigira dzidziso nekubatanidza Magwaro pamwechete. Tinogona chete kudzidzisana kubva pamavhesi eBhaibheri akanyorwa nemapostora. Zvakabatwa paitaura hama Branham, kana zvikanzwisiswa zvakanaka, zvinozivisa Bhaibheri kwatiri.
Hama Branham vanofanira kutidzosera kuMagwaro. Havagoni kudzidzisa kana kuzivisa zvavanofunga ivo zvisiri muMagwaro. Vanofanira kuva nechokwadi chekuti vatendi vekereke yenguva yekupedzisira vanotenda zvakafanana nekereke yekutanga.
MATEO 23:10 Musaidzwa vo vatenzi, nokuti mumwe chete ndiTenzi wenyu, iye Kristu.
Jesu haana kubvira akada kuti vapostora gumi nevaviri vaitwe vanatenzi. Izwi rinoreva kuti “tenzi” mazuva ano “ndivakuru”. Pakanyorwa Testamente nevapostora, Mwari aive asingadi chero munhu anozviita mukuru mukereke. Basa remapostora raive rekutiudza Shoko raMwari. Kana tikateerera Bhaibheri, tinenge tichiteerera Mwari, kwete mapostora akanyora Bhaibheri.
MATEO 23:11 Asi mukuru pakati penyu ngaave muranda wenyu.
Vafudzi vanozvidaidza kuti vafundisi kana kuti mapasita anozvisimudzira pamusoro pevamwe vanhu mumasangano uye vamwe vashumiri. Izvi zvakaipa. Mushumiri muramda. Hakuna muranda akakosha. Kuzviona sewakakosha kutukwa.
MATEO 23:12 Aninani unozvikudza uchaninipiswa, naaninani unozvininipisa, uchakudzwa.
Vaparidzi vanozvisimudzira kuti vaonekwe uye kuti vaunganidze mari zhinji nepavanogona napo.
Munokwanisa kufunga kuti vakakosha asi Mwari haafungi kudaro.
MATEO 18:1 Nenguva iyo vadzidzi vakavuya kuna Jesu vakati, ndianiko mukuru pavushe hwokudenga?
Vapostora, vaive vashoma pakuverengwa kwavo, vaive vatozadzwa nekuda kuva vakuru kukunda vamwe, kubva pakutanga. Jesu haana kufadzwa nazvo. Asi izvi zvonoratidzira kutadza kuri murudzi rwevanhu rwese. Rudo rwekuzvikudza nekuzvida. Ndicho chikonzero nei vanhu vachizvitora mifananidzo inonzi “maserufi” kana mifananidzo yavo yavanozvitora vega pamafoni avo. Nditarisei. Vanoda kwazvo kukwezva meso evanhu kwavari.
Kuita uku kwakazokura kusvika patsoko yakazvitora mufananidzo. Mufananidzo iwoyo wetsoko wakasarudzwa kuita “munhu wegore iroro”. Tsoko yakaisa kukosha kwese kwemaserufi pamumvuri. Mwari ari kuedza kutiudza chimwe chinhu.
Jesu aifanisa kubvisa kuzvikudza uku kubva muvadzidzi ava nekuti aiziva kuti pakupedzisira vachatiza kubva pakutonga kwaPirato paizodururwa ruvengo rwemaJuda panaJesu. Izvi zvakavadzosera kumashure zvishoma zvikashaisa basa kuzvikoshesa kwavo. Kana dambudziko chairo rikasvika, vaidzokera shure nekukasika. Asi ipapo, vaifunga kuti vaive vakuru mukuzvikoshesa kwavo.
Rimwe zuva, vachienda kumusoro kuguta reKapenaume, pavaifamba, chavaigona kuita chete kukakavadzana pachavo kuti ndiyani aive mukuru pavose. Uku kwaive kuita kwekudzikisirwa kwavo. Jesu paakabvunza nezvazvo, vakanyadziswa kusvika pakunyarara. Isai mufundisi muhuvepo hwaJesu mugoona kuti mufundisi haana kukosha sei kana achienzaniswa naJesu.
Isu vanhu tine zvatinoreva nekuti Kristu akatiripira muripo mukuru kwazvo. Asi hatina kukosha nekuti zvatinofunga isu hazvina maturo.
34 Vakaramba vanyerere, nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira, kuti mukuru ndiani
Asi vainonoka kudzidza kwazvo.
Kuda kuzvikoshesa uku ndicho chinhu chikuru uye kutadza kukuru muhunhu hwedu hwevanhu.
Mai vaJakobo naJohane vakakumbira kuti vanakomana vavo vaviri vaiswe pamusoro pevamwe vese.
Mai ava havana kuziva kuti mwanakomana wavo Jakobo ndiye mupostora aizotanga kuuraiwa. Saka hushumiri hwake hwaizodzikatirwa nekushingaira kwazvo kwaive nemupostora Pauro. Pakupera kweBhuku raMabasa avaApostora zvaive pachena kuti Pauro ndiye akazosara akamira pavose, kwete Jakobo. Zvikukutu kuna amai vanoda kukudzwa nekuita mbiri kwemhuri yavo.
Tarirai kuti kukosha kunobata sei mudzimhuri. Ndinoda kuti mhuri yangu ive yakakosha. Mhuri yangu yakakosha kukunda mhuri yako. Izvi zvinodaidzwa kuti rusarura ganda (nepotizimu). Ivara rinosiririsa kwazvo rinotindivadza nhorondo yevanhu. Rusarura ganda ndicho chinhu chiri pamusoro pehuwori. Baba nemwanakomana wavo vose vafundisi, vanhu vane mbiri. Vanochengeta mari yese mumhuri yavo. Kereke yarasika panzira zvakadii?
Jesu aive asingafadzwi namai kana nevanakomana vavo.
Kumberi muBhuku raMabasa:
MABASA 15:36 Zvino mamwe mazuva akati apfuvura, Pauro akati kunaBharnabhasi: Ngatidzoke zve tindoshanyira hama muguta rimwe nerimwe matakaparidza shoko raShe, tivone kuti vakadini.
Vaive vasina kusiya mapasita achitungamirira kereke. Vese vavaive vatendeutsa vaive hama munaShe.
MABASA 17:10 Pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Berea vusiku.
Paive pasina mufundisi aivepo kuti audze vanhu zvekuita.
Hama munaShe dzaishanda sechikwata pakuita sarudzo.
MABASA 17:14 Ipapo hama dzakatuma Pauro pakarepo kusvikira kugungwa, asi Sirasi naTimotio vakasarapo.
Nhaurirano pakati pehama dzaiitika pakati padzo kuti dzisarudze kuti chii chaizoitwa. Kereke yega yega yaizviitira sarudzo dzayo. Hapana mufundisi aitonga aivaudza zvekuita. Hapana vanhu vanotyiwa kana vane mbiri vaizobva kune rimwe guta kuuya kuzovaudza kuti voitei.
Sirasi naTimotio vaive vakasununguka kutevera hutungamiri hwavo pachavo.
Mwari aitungamirira kereke, kwete mumwe munhu mumwechete.
MABASA 18:27 Zvino wakati achida kuyambukira Akaya, hama dzikamusimbisa, vakanyorera vadzidzi kuti vamugamuchire. Zvino wakati asvika, akabatsira zvikuru ivo vakatenda nenyasha.
Tarirai rusununguko rwaive nehama rwekuita zvinhu uye kuita sarudzo. Hapana munhu mumwechete aive mukuru.
Tarirai kushaikwa kwekutaurwa kwapasita kana mufundisi semunhu mumwe anoita sarudzo mukereke. Hazvishamisi kuti nei kereke yekutanga yaibudirira zvakadaro.
MABASA 21:17 Zvino takati tichisvika Jerusarema, hama dzikatigamuchira nomufaro.
18 Fume mangwana Pauro akapinda nesu kunaJakobho; navakuru vakanga varipo vose
Jakobo aive mupostora. Vamwe vese vaive vakuru nehama munaShe. Vaive vasina kuparadzaniswa sezvazviri nhasi kuita vafundisi vanotonga humwe hushumiri hunokwanisa chete kubata basa mukereke kana huchibvumirana nekuremekedza mufundisi.
Nhasi makereke anosimudzira chiprista sechenguva yaAroni chehushumiri hwemabasa mashanu pamusoro pesangano, nemufundisi achisimudzirwa pamusoro pehushumiri hushanu mukereke.
Tinototadza kwazvo pachimiro chatinopa kereke.
Nhasi makereke, ane mufundisi semusoro, anotevera muenzaniso wakaiswa nekereke yeRoman Catholic. Mai mhombwe vakadzidzisa vanasikana vavo mhombwe kuti vanotevedzera sei tsika dzevanhu nemaitiro avo.
Bhaibheri rinotaura kuti nekuti takazvarwa patsva tinokwanisa kudaidzwa kuti vana vaMwari saka tiri hama nehama nunaShe. Hukama hunotaura pamusoro pekuenzana hakuna akakosha kukunda mumwe.
VAROMA 8:29 Nokuti vaakaziva kare, ndivo vaakatemera vo kare, kuti vafanane nomufananidzo woMwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji;
Kurarama nezvatakatemerwa zvinoreva kuti Jesu ndiye Mumwechete akakosha, Dangwe, pakati pehama dzese. Hapana kutaurwa nezvezvidanho zvehutungamiri zvevanhu vakasimudzirwa vehushumiri hwemabasa mashanu nemufundisi agere pamusoro pavo.
Kereke yekutanga yaisangana iri mapoka maduku mudzimba.
I VAKORINTE 16:19 Kereke dzapaAsia dzinokukwazisai. Akwira naPrisira vanokukwazisai zvikuru munaShe, pamwe chete nekereke iri mumba mavo.
VaRoma vaitambudza maKristu kusvika mugore ra312 AD. Saka zvaive zvisina maturo kuti vaungane muzvivakwa zvikuru sezvo vese vaizosungwa zviri nyore. Kupfurikidza kusanganirana mudzimba vaizochengetedzeka vorega kubatwa nekukasika.
ChiKrustu chemakwikwi chinobva chatanga. Chinodaidzwa kuti “chichechi-chechi”. Kereke yangu iri nani pane kereke yako. Mufundisi wangu ari nani pane mufundisi wako. Kereke (kana boka revatendi) rinosangana mumba maKroe rakaona kuti mamwe mapoka aiona kunge ari nani sezvo aizviti akakosha achizvidaidza nemazita evanhu.
Pauro haana kufadzwa nekuita uku kwekuti imwe kereke yainzi yakakosha kukunda imwe. Pfungwa yekuti mumwe mutungamiri ari nani kupinda mumwe.
I VAKORINTE 4:6 Zvino hama dzangu zvinhu izvi ndakanyora ndichizvifananidza ini naAporo, nokuda kwenyu; kuti mudzidze kwatiri kusapfuvura izvo zvakanyorwa, kuti mumwe arege kuzvikudza, achitsaura mumwe kunomumwe.
Hakuna muKristu, hakuna mufundisi kana pasita anofanira kuzvikudza nekukosha kudarika vamwe. Izwi rekuti mufudzi vaya vanozviti mapasita kana kuti vafundisi nhasi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva uye rakatukwa katanhatu muTestamente Yekare muBhuku raJeremia. Hahuiti kunge hushumiri hunofanira kutonga kereke zvachose.
I VAKORINTE 14:26 Zvino tichatiyiko, hama dzanguKana muchivungana mumwe nomumwe unepisarema, unechokudzidzisa, unechakamuzarurirwa, unorumwe rurimi, unechokududzira. Ngazviitwe zvose, kuti musimbiswe.
Pauro aida kuti hama munaShe dzese dziwane chekuita mumusangano wekereke. Haana kuti mufundisi ndiye anofanira kutonga nekuparidza iye ega apo vanhu vachishanduka kuita madutu vachiedza kudzeya zvese zvaanotaura.
VAGARATIA 4:28 Zvino imi, hama dzangu, muri vana vokupikirwa saIsaka.
MaKristu ese akaenzana sezvo tese tiri vana vanogamuchira zvakavimbiswa naMwari kunguva imwe neimwe.
Hakuna mwana mumhuri akakosha kudarika vamwe vana mumhuri.
VAKOROSE 1:1 Pauro, muapostora waKristu Jesu nokuda kwaMwari, naTimotio, hama yedu.
2 kuvatsvene nehama dzakatendeka munaKristu vari paKorose:
Pauro anozvidaidza mupositora. Aive mupostora. Timotio, nekukura kwaaive akaita muhushumiri hwake akadaidzwa kuti hama. MaKristu ese muguta reKorose vaidaidzwa kuti vatsvene kana kuti hama.
Hakuna kutaurwa pamusoro pemufundisi kana pasita akasimudzirwa. Hapana kana mufundisi kana pasita anozvininipisa zvake ataurwa.
Muguta reRaodikia, hapana kutaurwa nezvemufudzi kana pasita anozviti mufundisi mazuva ano. Iyi iyambiro kunguva yekereke yekupedzisira Raodikia. MaKristu aidaidzwa kuti hama. Nimfa aive neboka revatendi raisanganirana mumba make.
Uyu ndiwo muenzaniso mukuru kunguva yekereke yeRaodikia. Mapoka maduku anosangana mudzimba. Pasina mufundisi anotonga. Pasina munhu akakosha pakati peboka anozviti ndiye mukuru muboka revanhu vasina kukosha vanenge varipo. Kereke yega yega panzvimbo yaifambiswa nevakuru panzvimbo ipapo.
I TIMOTIO 5:1 Usatuka mukuru, asi umuraire sababa, navaduku savanun’una,
Vakuru ndidzo hama dzakura pamakore uye paruzivo rweMagwaro. Vakura papfungwa uye vanoziva zvizhinji muEvangeri.
I VATESARONIKA 5:12 Zvino tinokumbira kwamuri, hama dzangu, kuti muzive avo vanobata pakati penyu, vanokutungamirirai munaShe, vanokurairai.
Kune vanhu, vakawanda, vaive vatungamiri vekereke muguta reTesaronika.
“MunaShe”. Vanotonga chete nekudzokorora zvakataurwa muBhaibheri.
Vaive vakuru vaibata mukereke.
Vamwe vevakuru ava vaive vaparidzi nevadzidzisi. Asi kwete vese. Vakuru vose vaive vakafanira kuremekedzwa, asi kunyanya vakuru vaibata muShoko raMwari.
Vakuru vaisaparidza nekudzidzisa vakaitawo basa guru pakubata kereke.
Vakuru vakawanda vaive vabati vekereke, asi hapana kutaurwa pamusoro pehutongi hwemufudzi kana pasita anodaidzwa kuti mufundisi.
JAKOBO 3:1 Hama dzangu musava vadzidzisi vazhinji, zvamunoziva kuti tichatongwa nokupfuvurisa.
Vakuru wezvikoro vanodzidzisa. Vadzidzisi vanodzidzisa chokwadi kubva muMagwaro. Asi ngwarirai musamhanyire muhushumiri hwekudzidzisa. Vaya vanokanganisa padzidziso vachiguma vakutaura zvisimo muMagwaro vachatongwa nokupfuvurisa.
Kudzidzisa Bhaibheri kunoreva kuti kubatanidza mavhesi eBhaibheri pamwechete, kwete kubatanidza kuturikirwa kwemashoko akabatwa paitaura vanhu pamwechete.
MABASA 16:5 Naizvozvo kereke dzakasimbiswa pakutenda, dzikawanda pakuverengwa kwadzo zuva rimwe nerimwe.
Inzira ipi yaishandiswa naPauro kutanga makereke paEfeso?
Kereke iyi yaizova mbambo yekereke yenguva yeEfeso nemamwe makereke aizotevera.
Kufudza boka, kereke yaMwari paEfeso, ibasa remufudzi asi basa iri harina kupihwa kumunhu mumwechete. Ibasa rechikwata chevakuru vepanzvimbo vanobva paEfeso. Vakuru kana maeredha ndivo vatariri kana mabhishopu.
MABASA 20:29 Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingaregi boka.
Asi boka remaKristu rinova pamuedzo nemapere. Boka remapere rinotungamirirwa nerakasimba racho, mukono mukuru. Saka bere mufundisi anoparadza hupikisi hwese muboka ozviita iye musoro wekereke asina simba rinobva muMagwaro pakuita izvi. Tiri kurarama munguva dzinotyisa.
Izvi ndizvo zvakadzidziswa naPauro Testamente Itsva ichangotanga.
Ngatitarisei kuti Petro akataura kuti kudii Testamente Itsva yakunopera.
2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokuroverwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari; musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa;
3 Musingaiti nesimba nezvamakagoverwa, asi muve vatungamiri veboka.
5 Saizvozvo imi vaduku muzviise pasi pavakuru, nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kunomumwe, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.
Petro akataura nevakuru semumwe mukuru pamwechete navo. Haana kuzvipa chigaro. Haana kuzvikudza semupostora.
“Fudzai boka raMwari riri pakati penyu”. Iri ibasa remufudzi. Harisi basa remunhu mumwechete. Ibasa rechikwata rakapiwa kuvakuru. Hapana pataurwa pano nezvemufudzi anodaidzwa mazuvano kuti pasita kana kuti mufundisi. Petro ataura pano kuti hakuna anofanira kushandisa chisimba pamusoro pevamwe. Hakuna kereke inoda munhu mumwechete semukuru.
Hamuna zvinzvimbo mukereke. Vakuru vakasiyana siyana vanoita mabasa nehushumiri hwakasiyana. Vamwe vakuru havana hushumiri hwemabasa ekuparidza. Kune hushumiri hwakasiyana nemabasa akasiyana, asi vese vane zvinzvimbo zvakafanana: mukuru.
Asi vakuru vese vanoremekedza vanhu vari muboka vanogona kuvagadzirisa vachishandisa Shoko raMwari.
Munhu wese anoremekedza munhu anokwanisa kuvaratidza Magwaro. Hakuna mukuru. Hakuna vanhu vanokudzwa. Hakuna vadzvanyiriri.
Kuwira pasi kwemudzvanyiriri Mugabe muAfrica chiratidzo chenguva kukereke. Hakuna vadzvanyiriri vachiri kudiwa.
Petro akabva ataura pamusoro peMufudzi chaiye, Jesu. “Jehova ndiye Mufudzi wangu”.
Bhishopu angori mukuru (eredha) nekuti ane basa rakafanana neremutariri.
I TIMOTIO 3:2 Naizvozvo mutariri unofanira kuva munhu usina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwechete, wakangwara, wakachenjera, unemugarire wakafanira, unoitira vaeni rudo, unoziva kudzidzisa.
3 Usingadi waini, usingarwi, asi munyoro, usinegakava, usingakariri mari;
4 Unobata imba yake zvakanaka, unavana vanozviisa pasi nomugarire wose unokudzwa.
I TIMOTIO 3:8 Saizvozvo vo vashumiri ngavave vanokudzwa, vasinamazwi maviri, vasingadi waini zhinji, vasingakariri fuma yakaipa.
11 Saka navakadzi ngavave vanokudzwa, vasingacheri vamwe, vakasvinuka, vakatendeka pazvose.
12 Vashumiri ngavave varume vanomukadzi mumwechete, vanobata vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka.
1957-0908M VAHEBERU CHITSAUKO CHECHISHANU NECHECHITANHATU. 1
Asi ndinotenda musimba guru resangano repanzvimbo. Hongu. Regai kereke imwe neimwe izvimiririre, isarudze mufudzi (pasita) wayo, vatariri vayo, chero chii zvacho. Uyezve, nenzira iyoyo, munhu ari mukereke imomo haana bhishopu pamusoro pake. Mweya Mutsvene unoda kutaura nekereke iyoyo, havana wavanofanira kubvunza kuti voita ichi here kana icho. Mumwe nemumwe anenge achitaura neMweya Mutsvene. Ndiratidzei neBhaibheri kuti chii chikuru, kudarika mukuru wepanzvimbo mukereke yenzvimbo yake? Ndizvo chaizvo, hongu, baba, runyararo mukereke yepanzvimbo, kereke imwe neimwe yakazvimiririra. Zvino, hukama, ndizvo zvakanakisa. Kereke yega yega inofanira kuva nehukama hwakadaro, pamwechete. Asi rugare mukereke yepanzvimbo!
Dzidziso yavanikoraiti inosimudzira munhu mumwechete kuti atonge kereke.
1965 BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 5
Zvino dzidziso iyi yakatanga sechiito munguva yekereke yekutanga. Zvinoita sekuti idambudziko riri mumashoko maviri: ‘vakuru’ (maeredha) uye ‘vatariri’ (mabhishopu). Kunyange Bhaibheri richitaura kuti mune vakuru kana maeredha akawanda mukereke panzvimbo, vamwe vakabva vatanga (Ignetius pakati pavo) kudzidzisa kuti pfungwa yekuva nabhishopu yaive yakukosha kana kuva nesimba nekutonga pamusoro pevakuru. Zvino chokwadi chenyaya iyi ndecheizwi rekuti “mukuru’ rinotaridza kuti munhu wacho ndiyani, apo izwi rekuti bhishopu rinotaridza basa remunhu wacho. Mukuru ndiye munhu. Bhishopu ndiro basa remunhu wacho.
‘Vakuru’ ragara uye richaramba richitaura pamusoro pezera remunhu munaShe. Mukuru, kwete nekuti akasarudzwa kana kuti akagadzwa nezvimwe zvakadaro. Asi nekuti AKURA. Akwegura, adzidza, kwete rema, anovimbika nekuda kwenguva refu yaagara uye kupupura kweruzivo rwake ari muKristu.
Asi kwete, bhishopu haaenderani nechipostora chaPauro, asi ivo vakatoenda kuna Pauro paakavadaidza vachibva kuEfeso vachienda kuMireto kuna Mabasa avaApostora 20. Muvhesi 17 Bhaibheri rinoti “vakuru” vakadanwa muvhesi 28 vanodaidzwa kuti vatariri(mabhishopu). Mabhishopu aya (hazvishammisi vaive nepfungwa dzezvematongerwo enyika uye nzara yemasimba) vakataura kuti Pauro akati “vatariri’ vaive nesimba kudarika vakuru panzvimbo mukereke yake chete. Kwavari mutariri aive ane simba rakawedzerwa pamusoro pevakuru vakawanda panzvimbo. Chinhu ichi chaive chisiri muMagwaro kana munhorondo, asi kunyange munhu akaita saPorikapi akatevera kuita uku.
Kwaive nevakuru vakadaidzwa naPauro kubva kuEfeso. Kwaive kusiri kubata kwemunhu mumwechete.
Saka kwakabva kwaberekwa tsika yekuisa kereke yese pasi pemunhu mumwechete, anodaidzwa kuti muprista kana pasita. Ipapo bhishopu akabva asimuka achitonga chikwata chevaprista nemapasita. (dzimwe nguva munhu uyu aidaidzwa kuti mupostora pachinzvimbo chekuti bhishopu). Achibhishopu akabva asimuka kutonga mabhishopu. Zvino, makore akapiteredza 700 AD, kadhinari akabva aiswa pamusoro pechikwata chemaachibhishopu. Pope achibva aiswa pamusoro pemakadhinari.
Kwaive kusina bhishopu mumwechete muguta aitonga makereke muguta.
VAFIRIPI 1:1 Pauro naTimotio varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari aFiripi, navatariri navaranda vekereke.
Vhesi iri rinoratidza kuti kwaive nevatariri vakawanda paFiripi. Vaingove vakuru.
Saka vaive varanda ndivanani?
Varanda vaive vakuru vakasarudzwa kuti vabate pamabasa emaoko uye kufamba kwemari mukereke yega yega. Vaive vachibata pakugovaniswa kwezvinhu zvakaita sechikafu.
MABASA 6:1 Zvino namazuva iwayo vadzidzi vachiwanda, vaJuda, vaitaura chiGiriki, vakanyunyutira vaHeberu, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwomusi mumwe nomumwe.
Tarirai, mapoka maduku paakatanga kukura matambudziko akasimuka.
2 Zvino vanegumi navaviri vakadana vadzidzi vazhinji, vakati: hakuzakafanira kuti isu tirege Shoko raMwari, tishumire pamatafura.
3 Zvino hama dzangu, sanangurai pakati penyu varume vanomwe vanopupurirwa zvakanaka, vazere nomweya novuchenjeri vatingaisa pabasa iri.
Kana makereke aine mapoka maduku, kwaive kusina basa nekuti kusarudzwe varanda.
Zvino kereke muJerusarema yakakura yaive yokwanisa kuzvidaidza kuti mai vemakereke, zvaizoipa kukosha. Saka Mwari akabva aparadza Jerusarema muna 70 AD maKristu akapararira nekukasika, vakaguma vave munzvimbo dzese.
1962 06 01 KUTORA RUTIVI RUMWE NAJESU.
Zvino, munoziva here, vanhu vekutanga ava pavaibuda dzimwe nguva vaingova vatanhatu kana vasere vavo? Vakazunza nyika. Zvakanaka, munoziva, apo Akwira naPrisira, vhuserere huru yaiitwa naAporosi ikoko, kwaingova nevarume nevakadzi vanenge vatanhatu kana vasere paboka iroro. Kereke iyoyo yese, ndinoreva vanhu vatanhatu kana vasere. Kakapetwa katanhatu kana kanomwe pahuwandu hwatiri muno manheru ano ndizvo zvavaive ipapo.
Munoziva, Jesu aingova nevapostora gumi nevaviri. Isu tinogarofunga pamusoro pechinhu chikuru, asi Mwari haatariri vanhu vazhinji. Mumapoka maduku aya ndimo maanobata zvikuru. Mazviona? Tarisai mukati mengeva kubva pakutanga, pese paaisangana nevanhu. Maive mumapoka maduku, mazviona, achitaura navo, achivagadza. Mufaro waMwari kuita izvi. Ndiyo nzira yaanoda kuzviita nayo. Zvino tinoda kuti Mwari agare pakati pedu, toenda tichiita zvinhu izvi.
Mwari anobata nekubata kukuru muboka duku. Makereke makuru ane mweya unotendera vanhu kudakara nekuvarairwa.
ZEKARIA 4:10 Nokuti ndiyani wakashovora zuva rezvinhu zviduku? Nokuti awa manomwe achafara zvikuru, achavona rwonzi rwokuyera muruvoko rwaZerubaberi; awa ndiwo meso Ajehova anofamba pose-pose panyika yose.
ISAYA 1:9 Dai JEHOVA wehondo asina-kutisiyira vakasara vashoma-shoma, tingadai takafanana neSodoma takaita seGomora
Saka makereke maduku anokwanisa kufadza Mwari.
Chigaro chinomirira simba.
VaFarise vakazviisa semunhu mumwe anotungamirira sinagoge yemaJuda. Vakawana simba ravo nekutaura zvavakabata paitaura muprofita Mosesi. “Muprofita akati, ...” “Muprofita akati ....”. Mukuita izvi vakaramba Jesu aive Shoko raMwari.
Saka nhasi vafundisi vagere pachigaro chehama Branham chesimba.
Vanowana simba ravo nekutaura zvavakabata zvakataurwa nemuprofita William Branham “Muprofita akati ....”. “Muprofita akati ....”.
Mukuita izvi vanoramba Shoko raMwari rakanyorwa.
MATEO 23:6 Vanofarira zvigaro zvepamberi pamitambo, nezvigaro zvepamberi mumasinagoge.
MATEO 23:7 Nokukwaziswa padare , nokuidzwa Rabi navanhu.
Vakuru vemakereke vanoda kuitwa vakakosha. Zvigaro zvepadariro. Zvigaro zvekumberi, vakatarisana nevanhu. Vakasimudzirwa kana kupatsamurwa kubva kuruzhinji. Hamugoni kutaura mazita avo kana kutaura nezvavo musina kuisa zita rechinzvimbo rekuti “pasita”. Zita rechinzvimbo rekuti pasita rinogarotaurwa nekudzokororwa. Pasita chino pasita icho.
Hakuna humwe hushumiri hunoita izvi.
MATEO 23:8 Asi imi misaidzwa Rabi; nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe, imi mose muri hama.
KumaJuda vanaRabi vaizovatungamirira pakunoramba Jesu. Saka garai kure nechinzvimbo chaRabi.
KumaHedeni, Pasita kana mufundisi anokutungamirirai kubva paShoko raMwari rakanyorwa achiritsiva nezvaakabata paitaura vanhu. Saka Pasita kana mufundisi anongorasisa vanhu sezvinoitwa nanaRabi.
MABASA 8:1 Sauro wakanga achitenda kuvurawa kwake. Zvino nenguva iyo kereke yapaJerusarema yakatambudzwa zvikuru, vakaparadzirwa vose kunyika yeJudea neSamaria, vakasara vaapostora bedzi.
Kwaisadiwa mvumo yekuparidza Evangeri.
Vaingoenda kunoparidza zvakadaro.
Zvino Mwari akavatambudza kusvikira vapararira vachitiza nehupenyu hwavo. Kwese kwavaiguma vave, vakatanga kuparidza Shoko. Vaive bato reshanduko. Hakuna akagona kuvadzora kwavaipararira vachienda.
MaKristu mamiriyoni matatu vakauraiwa nevabati veRoma kutanga naNero muna 64 AD. Kuuraiwa kwevanhu kwakaipa uku kwakazomiswa nemubati Constantine muna 312 AD. Saka mumazuva iwayo chaive chinhu chakaoma kuva muKristu. Kurwadziswa nekuuraiwa kwaigona kutanga chero nguva. Mapoka makuru aisangana muzvivakwa “zvemakereke” vaizova vakanangwa zvisina kupokana kuti vasungwe nekuiswa mutorongo nemaRoma. MaKristu aizofanira kutiza kana vakanzwa shoko rekuti kurwadziswa kwatanga munzvimbo dzavanenge vari. Kutya nekusagadzikika zvakaita kuti mapoka arambe ari maduku uye akapararira kwese kwese. Saka kwaive kusina mukana wekuti vatungamiriri vasimuke nekutonga kereke zviri nyore.
Nguva yekereke yakarwadziswa yechipiri Simirna (zvinoreva kurwadziwa nerufu) yakapera muna 312 AD ndiyo yega kereke isina kumhurwa naMwari. Kutiza nehupenyu hwavo kwakavapa mukana muduku wekuvaka zvivakwa zvemakereke uye misikidzo dzinorumbidza vanhu vanotungamirira.
VAEFESO 4:11 Zvino wakapavamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevangeri, vamwe vafudzi, navadzidzisi.
Hushumiri hwemabasa mashanu uhu hunoshanda sei?
Vapostora, mumashure mekufa kwemapostora gumi nemaviri ekutanga, vanodaidzwa kuti mamishinari. Varume vanoenda kune imwe nyika kunogarako kwechinguvana vachiparidza Evangeri.
Vaprofita. Uhu hushumiri hwemweya unoshamisa uchitaura zviitiko zvenguva inouya kuti kereke igadzirire kugona kurarama kana zviitiko izvozvo zvaitika. Izvi zvinobatawo pashoko rinotumirwa naMwari kuvanhu vakazvimiririra kupfurikidza maprofita.
Vavangeri vanodaidza vatadzi vovaratidza kuna Kristu nekuita kuti vaponeswe.
Rudo rwehufudzi ndiko kubatsira vanhu nemazano mumatambudziko avo avanenge vari nawo muhukama hwavo. Kudzidzira kugona kuvumba muna Kristu neBhaibheri kuti vavake kutenda kwavo.
Kutenda kunouya chete nekunzwa Magwaro, kwete mifungo yevanhu netsika dzavo.
Kune dzidziso dzenheyo dzakakosha. Kutendeuka. Kutenda. Rubapatidzo. Kubatwa pamusoro. Kumuka kwevakafa. Kutongwa.
Mufundisi anoita mabasa ehufudzi anoita kuti vatendi vagone kupinda mune zvikamu zvina izvi kuti vave nehukama hwakanaka naMwari nevamwe vanhu.
Chekutanga mufundisi anovapa mukaka kuti vavakwe. Kudzidzisa vatendi vatsva.
Mumashure maizvozvo kunouya nyama. Pavanodzidza dzidziso dzakadzama kubva kuvadzidzisi veBhaibheri.
Zvishoma nezvishoma vanokwanisa kuenda mberi pakunonatswa nekudzidza kwavanenge vachiita chokwadi chakadzama.
Vadzidzisi veBhaibheri vanokwanisa kubatanidza Magwaro akasiyana siyana zviri nani kukunda vafundisi kana vavangeri. Saka dzidziso yakakosha kuitira kuisa vatendi mumuviri waKristu, mumashure mekunge vavangeri nevafundisi vavaratidza nekuvazivisa nheyo dzechiKristu.
VAHEBERU 6:1 Naizvozvo ngatisiye shoko rokutanga kwaKristu, tipfuvurire mberi pakukwaniswa, tisingaisi zve nheyo dzokutendevuka pamabasa akafa, nedzokutenda kunaMwari,
VAHEBERU 6:2 Nedzedzidziso dzerubapatidzo, nedzokuisa mavoko, nedzokumuka kwavakafa, nedzokutongwa kusingaperi.
Mumashure mekudzidza nheyo dzechiKristu dzidziso dzinenge dzakunzwisisika, inenge yava nguva yekuti dzidziso dzakadzama dzidzidziswe. Muono wakati kurei unofanira kusvikwa pauri apo vadzidzisi veBhaibheri vanozivisa zvakavanzika zveBhaibheri kupfurikidza kubatanidza Magwaro akakodzera pamwechete.
12 Kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira, nerokuvaka muviri waKristu;
13 kudzimara isu tose tisvike pavumwe bwokutenda nokuziva Mwanakomana waMwari, napamunhu wakura, napachiyero chovukuru bwokuzara kwaKristu;
Kuti tive nehumwechete pakutenda, tinofanira kutenda zvakatendwa nekereke yekutanga.
14 Kuti tirege kuramba tichingova vacheche, tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu, namano, kuti vatsause nokunyengera;
Dzidziso dzakasiyana-siyana dzinovakwa pamashoko akasiyana-siyana akabatwa paitaura vanhu anogadziriswa nenzira dzakasiyana dzemano akaipa.
Vanotenda kuMharidzo vaifunga kuti Hillary aizokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica mugore ra2016 nekuda kwenzira yaiturikirwa zvakabatwa paitaura vanhu. Kukanganisa kukuru uku kwaive yambiro pamusoro pekutevera zvinoturikirwa nevanhu pamusoro pezvavakabata paitaura vanhu voguma vakutenda zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Kereke yekutanga yakaparadzwa nekupatsanurana kwavaive vaita pavaisarudza kutevera vatungamiri vakasiyana. Saka vaive padanho revana vacheche.
I VAKORINTE 3:1 Ini, hama dzangu, ndakanga ndisingagoni kutaura nemi sokunavoMweya, asi sokunavenyama, sokunavacheche munaKristu.
2 Ndakakupai mukaka mumwe, handina kukupai zvokudya; nokuti makanga musingagoni kudya, nazvino hamugoni.
Mukaka unomiririra dzidziso inoda rudo rwemufudzi uye kurudziro yake. Nyama inomiririra zvinhu zvakadzama zvinokwanisa kuongororwa nemudzidzisi weBhaibheri chete achizvitsigira neBhaibheri. Vafundisi nekuedza kudzidzisa zvakavanzika zvakadzama, vanorasika muBhaibheri saka vanobva vasiyana neBhaibheri votanga kushingirira kubatanidza pamwechete zvavakabata paitaura vanhu. Kuturikirwa kwezvakataurwa uku kunosiyana kubva pamufindisi umwe kuenda pane mumwe zvekuti vanhu vanobva vakakatirwa kumativi akasiyana-siyana.
Dzidziso dzeMharidzo dzakasiyana idzi, dzinobva pane zvakataurwa uye fungidziro, dzinoparadzanisa vatendi zvakanakisa kuvaisa mumasangano akasiyana.
Sangano rega rega rinobva ratanga kutsvaga kusimudzira mukuru waro sekunge ndiye akanakisa kukunda vese.
I VAKORINTE 3:3 Nokuti muchiri venyama; nokuti zvapachinegodo pakati penyu, negakava, ko hamuzi venyama, muchifamba nomutovo wavanhu here?
4 Nokuti kana mumwe achiti: Ini ndiri waPauro; mumwe; Ini ndiri waAporosi; ko hamuzi venyama here?
Kereke imwe neime inodada nemufundisi wayo sekuti ndiye ega anoziva chokwadi. Zvakadaro, kune masangano emakereke eMharidzo asingabvumirane ese pachinhu chimwechete. Sezvo kuri nemasangano 45 000 ese asingatenderane.
Kutendera mufundisi kuita musoro wekereke kunosimbisa kuita kwekuti vatendi vanozopararira pavanotevera vatungamiri vakasiyana-siyana, vese vasingatenderane zvakare.
Vafundisi vanofanira kuratidza vanhu kuti vangatange sei kutenda kwavo vachitevera Magwaro. Asi vanosarudza kusimbirira pane zvimwe zvezvinhu zvakabatwa paitaurwa zvavanoshandura kuita zaruriro “yakadzama” isingakwanisi kutsigirwa neMagaro.
Vafundisi vanogona kwazvo kuisa pasi peshamhu kana kudzinga vanhu vanovapikisa, kunyanya kana munhu iyeye akavadzosera kuvhesi reBhaibheri rinorwisa rutivi rwamufundisi.
Kupatsanurana uku kunokuchidzirwa nekusawirirana kwakadzika-dzika kunoshanduka nekukasika kuita ruvengo.
Tsamba yekupedzisira yakanyorwa nemupostora Johane tisati tasvika panoperera Bhaibheri muBhuku raZvakazarurwa kuburitswa pachena kunotyisa kwekubatwa kwakaipa kwesimba nenzira yehudzvanyiriri.
Murume ainzi Diotrefe akabata kereke, akaramba mupositora Johane achidzinga vanhu mukereke vese vaisatenderana naye.
Uhu ndihwo hunhu hwevafundisi nguva yedu ino.
Kana muchitenderana nemufundisi ndimi munenge muri mbiru dzokutenda. Kana muchipikisana nemufundisi munodzingirwa kunze. Musafe makaedza kutaura mavhesi eBhaibheri akanyorwa nemupostora anopikisana nezvinotendwa nemufundisi. Mufundisi anobata kereke nechitsama chake chakasarudzika chezvakabatwa paitaurwa nevanhu. Munomupikisa nekuzvitemba kwenyu henyu.
10 Naizvozvo kana ndichivuya ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti unotiitira makuhwa namashoko akaipa; vuye, haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.
Kuita uku kunoita semakambokunzwa here?
Uku ndiko kuita chaiko kwevafundisi kana mapasita kana kukaita munhu anovapikisa.
Vanoda kubata kwekutonga kwavo. Vafundisi vanopikisa zvakanyorwa nevapostora muBhaibheri. Vafundisi vanokwereta zvinzvimbo zvavo nesimba rekutonga kwavo uye mari yavanobata kubva kumazwi akabatwa kwete kuMagwaro.
III JOHANE 1:11 Mudikanwa, usatevere chakaipa, asi chakanaka. Uyo unoita zvakanaka ndowaMwari; unoita zvakaipa, haana kuvona Mwari.
Tarirai Diotrefe zvaakaita zvaive zvakaipa nekuti aive asingazivi Mwari. Vafundisi vemazuva ano, ndapota dzidzai.
MABASA 11:28 Mumwe wavo wainzi Agabo, akasimuka, ndokuvazivisa noMweya kuti nzara huru ichavapo panyika yose; iyo ikasvika panguva yaKraudio.
29 Ipapo vadzidzi vakatenderana, kuti mumwe nomumwe paaigona napo atume zvingabatsira hama dzigere Judhea.
Kereke yekutanga yaive nenzira dzakarongeka dzekutarisa nadzo zviitiko zvemukereke. Muparidzi haana kubvira azvidaidza kuti mupositora nekuedza kutsvagiridza zvimwe zvingareve izwi rekuti “mupostora”. Mupositora aiona zvinhu zviri mberi uye zvaizoitika saizvozvo. Hushumiri hwechiprofita uhu hwaizivisa zvichauya uye hwaichengetedza vanhu sezvo hwaibatsira vatendi kugadzirira uye kuti vakunde.
Kukosha kwaive pamari kwaive chisiri chegumi kana chikamu chimwe pazvikamu gumi. Vanhu vaipa nepavaigona napo. Davidi akatenga midziyo yeTembere asi vaida kumupa mahara. Aive asingadi kuitira Mwari asina chaaripira kazviri. Saka kereke yekutanga yaipa kana paine chiri kudiwa.
Mari yaitumirwa kuvakuru vekereke kunzvimbo dzive nenzara.
Hakuna kutaurwa muBhaibheri kuti mari inopihwa mufundisi. Izvi hazvimo muMagwaro zvachose.
Hakuna kutaurwa muBhaibheri kuti mufudzi (shepadhi) zvinoreva kuti mufundisi kana kuti pasita.
Hakuna kutaurwa muBhaibheri kuti mufundisi kana kuti pasita ndiye musoro wekereke.
Zvimiro zvemakereke edu emazuva ano izano remasangano, harina kubva muBhaibheri.
Kereke yekutanga yaive nenzira yekubatsirana pakurarama. Vaishanda kuti vazviriritire uye vaigovana zvakasununguka kune mumwe nemumwe.
II VAKORINTE 12:11 Ndava benzi; pakuzvirumbidza. Nokuti ini ndaifanira kurumbidzwa nemi; nokuti handizi muduku napaduku kuvaapostora vanopfuvura vose, kunyange ndisi chinhu.
Pauro, mupositora mukuru pavapostora vose akazviona asiri chinhu.
Hunhu hwevafundisi hwekuzvikudza uye hudzvanyiriri kunombosvika pakunyangadza. Hazvishamisi kuti nei nguva yedu yekereke yekupedzisira inoda kurutsisa Mwari.